Nyowani yepamusoro-soro ETA yakaunzwa yekubvisa Australia Yekupinda
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Technology » Nyowani yepamusoro-soro ETA yakaunzwa yekubvisa Australia Yekupinda
nhandare yendege • Australia Kuputsa Nhau • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • nhau • Kuvakazve • Technology • ushanyi • kutakura
Nyowani yepamusoro-soro ETA
Australia parizvino yakavharirwa vashanyi vazhinji vekunze, asi kana kuvhurwa kunoitika app nyowani yekufambisa pre-clearance yevashanyi kunyika inozivikanwa se Down Under inogona kuvimba neAPP nyowani kuti ifambise danho iri rinodiwa kuti upinde munyika.
Chirongwa cheAustralia ETA mugumisiro wekubatana kwekushandira pamwe kwekubatanidza nyanzvi kubva kuAustralia Dhipatimendi Rezvemukati, SITA, uye Arq Boka.
Yakagadzirwa uye yakagadzirwa muSydney, iyo app inobvumidza nyika dzakakodzera kuti dzishande zvakachengeteka yeETA, mumaminetsi mashoma, kubva kune avo nhare mbozha.
Uchishandisa zvakagadziriswa matekinoroji ku-auto-kuzadza dhata kubva kune anonyorera pasipoti uye kutora yavo biometric, iyi yakachengetedzeka-yega-yekuzvishandira maitiro haingowedzere chete kurongeka uye hupfumi hwe data asi inovandudza zvakanyanya mushandisi ruzivo.
SITA akapayona chirongwa cheETA chema2000 maOlympic eSydney kupa zviremera kuti zvionekwe mberi mumamiriyoni evashanyi vari kuronga kuyambuka muganho uye kudzikamisa mabhaisikopo kumamishinari eAustralia nenzvimbo dzekutamira kune dzimwe nyika. Kubva payakaunzwa, iyo ETA yakamira muyedzo wenguva uye yakatungamira nzira yekuti mavhiza emagetsi asimudzwe seyakajairika chiteshi yemhando dziri nyore dzevisa (semuenzaniso, Visa pakusvika) nemapazi ekupinda munyika.
Australia inoramba iri nzvimbo inozivikanwa yekufamba uye iyo ETA APP icharatidza kushanda kwayo mushure medambudziko razvino re COVID uye nyika yakavhurwa kuvafambi.
Mushure memakore anopfuura makumi maviri ekuchinja kukuru kwetekinoroji, yaive nguva yekudzorerazve iyo ETA kuburikidza neAustralia ETA app. Nyowani matekinoroji uye matsva paradigms anogadzira anochinja enharaunda tarisiro yekuwana, ruzivo, uye sevhisi, kunyanya kana hunyanzvi iri injini inopa simba shanduko.
Kuwanikwa uye kutsvagisa chikamu cheiyo projekiti kwaisanganisira kunzwisisa kwehupenyu hwevanhu uye hwepamoyo mufambi. Yakanangana nekuwana kunzwisiswa kwakadzika kweanokumbira, bhizinesi, uye indasitiri yekufambisa zvinodiwa uye zvinotarisirwa kutsanangura kumagumo-kumagumo ramangwana-nyika mushandisi rwendo.
Mukugadzira mhinduro yemazuva ano vachishandisa matekinoroji epamberi, timu iri yaifunga nezvekudiwa kwekupa chigadzirwa chisinganzwisisike uye chakachengetedzeka ichiendesa hunyanzvi hune chekuita nekutora data, kusimbisa, auto-huwandu, uye zvakanyanya kukosha, kuzivikanwa kwechitupa. Isu takatora hunyanzvi hwakazara, kusanganisa, uye kuyedza kwevashandisi kuona kuti mhinduro yainge yagadzirira uye mushandisi-centricity yakaramba iri pamoyo wedhizaini. Anobvisa denderedzwa akaputira ese echitatu-bato matekinoroji, nokudaro achigadzira iyo app ramangwana-chiratidzo uye zviri nyore nyore kune matekinoroji aripo kutsiviwa neatsva uye ari nani mune ramangwana.
Sisitimu yacho inowanika pamadhizaini. Kuchengeta iko kutarisisa pane ruzivo rwevashandisi, iyo app yaida kupa iri nyore uye yakatwasuka nzira yekuwana vhiza yeAustralia pamadhizaini pane ese iOS uye Android mapuratifomu.
Anoshanda sei Anoshanda?
Iyo app inoshandisa mafoni matekinoroji (Optical Character Recognition (OCR) uye Near Field Kutaurirana (NFC)) kutora uye kufanotangisa kuzadza pasipoti yakakosha uye ruzivo rwekuzivikanwa kubva pasipoti. Kunyatso kutora data rakakosha rekunyorera zvakananga kubva kunovimbika sosi rinobvisa zvikanganiso zvekupinda kwedata uye kusawirirana kunokanganisa kugadziriswa kwevisa.
Iyo app inosimbisa uye inogonesa mapasipoti emagetsi kuburikidza neiyo smartphone's NFC kugona panzvimbo yekushandisa kwete pamiganhu yepanyama. Kuwana chip chipasipoti kunowanikwa uchishandisa OCR kuverenga yakadhindwa Machine Readable Zone (MRZ) mukati mepasipoti uye kuwana kiyi. Iyi kiyi inobvumira chip kuti iwanikwe uye ishandiswe ichishandisa zvitupa zvedigital mukati mechip, kuona kuti pasipoti ndeyechokwadi uye chip haina kukanganiswa. Kana chip changosimbiswa, iyo data iri pachip - iyo ine gwaro rekufambisa, data rekuzivikanwa, uye mufananidzo wedhijitari wemubati wepasipoti - unoverengwa. Izvo zvino zvinofananidzwa neiyo selfie mufananidzo wekutora usati waenderera mberi.
Iyo selfie mufananidzo wekutora maitiro inoita yakaoma kurarama uye anti-spoofing macheki kune akawanda maface njodzi profiles, iyo inosimbisa kuzivikanwa kweiye anonyorera. Aya akakosha ekuchengetedza macheki anoitwa akasununguka mune chaiyo-nguva neapp pasina kukanganisa anonyorera.
Iyo OCR, NFC, selfie mufananidzo uye hwakaoma hupenyu, uye anti-spoofing macheki akabatanidzwa mukati meapp nenzira itsva, mune izvo zvatinotenda kuve yepasi rose kutanga.
Vafambi vari kuisa app nechimwe chezvinhu zvavo zvakakosha kwazvo - yavo data. Wakagadzirisa sei zvinovanetsa mukusimudzira kwayo?
Isu takashandisa Yakavanzika neKugadzira nzira mukati mekusimudzira kweapp, tichitanga neYakavanzika Impact Ongororo kuona kuti mirairo yese, kubata data, uye chengetedzo zvinoenderana nezvinodiwa neHurumende yeAustralia zvakavanzika.
Yese data yemunhu inochengetwa muhomwe yakachengeteka pane mudziyo wemushandisi. Hapana dhata rakagovaniswa nevamwe vanobatana, kunze kweMabasa ekuMusha, ayo anoda kuti ruzivo ruitise zvikumbiro zveETA. Mitemo neMamiriro zvakanyatso kusimbiswa mukati meapp kuti mushandisi agamuchire asati aenderera. Izvi zvinotsanangura kuti data rinochengetwa zvakadii, pamwe nemashandisirwo uye kuchengetedzwa kana muchichiendesa kuHome Affairs.
Kuti uenderere mberi nekuona kuvanzika kwemunhu, vanyoreri vanogona kudzima yavo yemunhu ruzivo uye zvakapfuura kunyorera kubva kuapp chero nguva. Uye zvakare, vese vanofambisa vamiririri vakanyoreswa michina vanonyorerawo panzvimbo yeavo vanonyorera havachengete munyoreri kana data rekunyorera pachigadzirwa chavo kana chikumbiro chaendeswa.
Iyo Anwendung inoshandisa yakachengeteka yenzvimbo yekuchengetedza uye yakasimba yekusimbisa maprotocol. Zvese kutaurirana pakati pechigadzirwa uye neshure masisitimu zvakavharirwa, kuve nechokwadi chekudzivirira kwekupedzisira uye kutonga pamusoro pemushandisi data.
Chii chave chiri mhinduro kusvika zvino?
Kubva pakutanga, iyo dhizaini dhizaini yakakoshesa kurerukirwa kwekushandisa kune iye anenge achinyorera asina kukakavara uye inonzwisisika ruzivo rwevashandisi pane ese maApp uye mapuratifomu eApple. Iko kunoguma kunyorera kwave kugamuchirwa zvakanaka, nevazhinji vashandisi vachiwedzera iko nyore kwekushandisa uye nyore.
Kuenderera mberi kwekutarisa, hunhu analytics, uye mushandisi mhinduro ndidzo chikamu chemhinduro nzira. Iko kugona kwekuvandudza iyo app nekukurumidza kwagonesa zvigadziriso kubatsira nekuverenga akasiyana marudzi epasipoti, kupa rutsigiro pane yekugadzirisa mamiriro, uye nekuvandudza mifananidzo yekutungamira kwekuraira.
Mhinduro yakakosha yakapihwa nevanokumbira kuburikidza nezvitoro zveapps uye neApp's Contact Us basa raendesa zvimwe shanduko nekuvandudzwa kwakaitwa kubvira kutanga kwendege, zvichidaro zvichisimbisa iyo app.
Iko kubatanidzwa kwemapoka evashandisi epasirese kuyedza akasiyana madhijitari uye kuunganidza ruzivo rwevashandisi ruzivo kwakavimbisa kuti chirongwa ichi chinoshanda munzvimbo dzakasiyana dzemidziyo uye epasipoti yemagetsi. Kubva pakuendeswa kweapp muna Gumiguru 2020, yatove nekufambisa kufamba kuenda kuAustralia kwezviuru zvevanhu panguva yedenda.
Nyowani yepamusoro-soro ETA yakaunzwa yekubvisa Australia Yekupinda - eTurboNews | Trends | Kufamba Nhau | Johnny G. Santo's Blog anoti:
Nyamavhuvhu 12, 2021 pa14: 06
[…] Nyowani yepamusoro-soro ETA yakaunzwa kujekesa Australian Immigration eTurboNews | Trends | Nhau dzekufambisa […]